नयाँ वर्षको दिनमा गर्न हुने र गर्न नहुने कुराहरु
नयाँ वर्ष २०७७ को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण पाठकवर्ग तथा महानुभावहरुमा सुस्वास्थ्य, दिर्घायू र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना गर्दछौं । साथै नयाँ वर्षको दिनमा गर्न हुने र गर्न नहुने कुराहरुको बारेमा ज्योतिष ठाकुरप्रसाद देवकोटाको सहयोगमा महत्वपूर्ण बुदाहरु उल्लेख गरेका छौं । जुन यसप्रकार रहेका छन् ।
नयाँ वर्षको दिनमा गर्नुपर्ने १० कुराहरु ।
१.विहान सूर्योदयभन्दा कम्तिमा पनि १ घण्टा अगाडि नै उठ्नुहोस् ।
२.उठिसकेपछि नित्यकर्म दिसापिसाव, योग व्यायाम र स्नान लगायतका कामहरु गर्नुहोस् ।
३.आफ्नो नित्य कर्म सकेपछि वासस्थान वा घरको मूलकोठा, पुजा कोठा, भान्सा लगायतमा कुचो लगाउने, आवश्यकता अनुसार पुछा लगाउने, घर आँगन सफा र पवित्र राख्ने काम गर्नुहोस् ।
४.सरसफाई पश्चात मूल ढोकामा पवित्र जल र पुष्प सहितका २ वटा कलस् राख्ने, कलस नै नभए वा डेरामै बसेको भए पुष्प भएपनि राख्ने गर्नुहोस् ।.
५.पुजाकोठामा दियो, कलस, गनेश स्थापना गरी धुप दिप सहित कुलदेवता, बास्तुदेवता, इष्टदेवता र आराध्य देवी देवताको पुजा गर्नुहोस् ।
६.सूर्यदर्शन गर्ने, सूर्यलाई तामाको भाडाले जल चढाउने गर्नुहोस् । विहान सूर्योदयको किरण, ताप र प्रकाश निकै लाभदायी हुन्छ । सूर्य ग्रहहरुको मालिक पनि हो । सूर्यको तेजले समस्त प्राणि र बनस्पती जगतलाई प्रभाव पार्दछ ।
७.नयाँ वर्षको दिन घरमा आएका र भएका छोरी, बहिनी, भान्जी लगायतका टिका दक्षिणा गर्नेहरुलाई टिकादक्षिणा दिई आशिर्वाद दिने गर्नुहोस् र सपरिवारले टिका ग्रहण गर्नुहोस् ।
८.यथासक्य मिठा परिकार बनाएर खाने गर्नुहोस् । सकेसम्म शाकाहारी भोजन नै खाने गर्नुहोस् । भोजन लिइसकेपछि सम्भव भएसम्म परिवारका सवै सदस्यहरु बसेर विगत वर्षका समिक्षा गर्ने र आगामी वर्षका लागि संक्षिप्त योजनाहरु बनाउने गर्नुहोस् ।
९. नयाँ वर्षको दिन सकेसम्म सफा पहिरनमा रहने, हाँसीखुशि रहने र आफन्त लगायत सवैमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने गर्नुहोस् ।
१०. साँझ सवैले घरघरमा दिप प्रज्वलन गरेर नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा दिपावली मनाउने गर्नुहोस् । धेरै खर्चिलो गर्नुपर्छ भन्ने छैन । पालामा बत्ति बालेर वा १,२ वटा मैंनबत्ति बालेरै मात्रै भएपनि गर्न सक्नुहुन्छ । दिप प्रज्वलनले तपाईमा खुसी, आनन्द र उर्जा मिल्नेछ भने तपाईमा असल काम कुराहरु गर्ने उत्प्रेरणा समेत मिल्नेछ ।
नयाँ वर्षको दिन गर्ने नहुने १० काम
१. सूर्योदय भन्दा ढिला उठ्न हुदैन । विहान ढिला उठ्नेको अधिकांश काम अस्तव्यस्त रहन्छ । दिनभर तनावको अवस्था श्रृजना हुन्छ ।
२.उठ्नवित्तिकै ऐना हेर्ने गर्नुहुदैन । बरु हाम्रा कर्म गर्ने हात हेर्दा केही फरक पर्दैन ।
३. पारिवारिक कलह वा झगडा गर्नुहुदैन । नयाँ वर्षको दिनमा गरिएको व्यबहार पटक पटक दोहोरिने सम्भावना रहन्छ । मान्छेको मनोवल समेत कमजोर बन्दै जान्छ ।
४.पैसा सापटी दिनुहुदैन र व्यापार व्यबशाय गरेको मानिसले उधारो पनि दिनुहुदैन । लामो समय फस्न सक्छ ।
५.नयाँ वर्षको दिन ऋण लिनुहुदैन । यदि लिनुुभयो भने वर्षभर नै ऋणको तनावमा पर्ने सम्भावना रहन्छ । आर्थिक संकटमा परिरहने सम्भावना रहन्छ ।
६.मद्यपान र धुम्रपान गर्नुहुदैन । जाँड रक्सी पीउने वा धुम्रपान सेवनले कुलतमा लैजाने, झगडा निम्त्याउने र लक्ष्यमा पुग्न नदिने सम्भावना बढी रहन्छ । यसले स्वास्थ्यमा लामो समय प्रतिकुल असर पार्न सक्छ । नयाँ वर्षको दिन बासी, त्यासी र सडेगलेका कुराहरु पनि खानुुहुदैन । मासु खानुलाई पनि राम्रो मानिदैन । अन्य प्राणि हत्या गरेर उत्सव मनाउनुलाई धर्म गरेको मानिदैन । अधिकांश मांशाहारीको स्वभाव हिंसात्मक प्रकृतिको हुन्छ । किनकी खानपानले स्वास्थ्य र मानिसको स्वभाव दुवै निर्धारण गर्दछ ।
७.नयाँ वर्षको दिन सिसाको वस्तु उपहार दिनुहुदैन । सिसा वा काँचको वस्तु टिकाउ हुदैन । उपहारको वस्तु तुरुन्तै विग्रने वा फुट्नुलाई राम्रो मानिदैन ।
८.जुवातास खेल्नुहुदैन । जुवातासले कहिल्यै पनि सुख र आनन्द दिदैन । जुवातासको नसाले सवैतिर तनाव श्रृजना गर्दछ ।
९.जोगी, माग्ने वा असक्त र असहाय घरदैलोमा आएमा अपमान गर्नुहुदैन । गरिब, दुखी र अशक्तको मन दुखाउनुहुदैन । सकेसम्म तुच्छ बचन र मनमुटाव पनि कसैप्रति गर्नुहुदैन ।
१०. नयाँ वर्षमा आउने पाहुनालाई चित्त दुख्ने र अपमान हुने काम कुराहरु नगर्नुहोला । घरमा आउने पाहुनाको यथाशक्य स्वागत सत्कार गर्नुपर्छ । राम्रो गर्न सके सवैबाट आशिर्वाद पाइनेछ ।